Ekwela ka ike gwụ gị na Social Media | Martech Zone
Ekwela ka Social Media gwụ gị
Thursday, August 11, 2011 Fraịde, Ọgọstụ 12, 2011 Douglas Karr
Otu onye n’ime ndị m na-aga ịnụ okwu bụ Jay Baer. Nke a ụtụtụ na m nwere na-eteta tupu anyanwụ ụgbọala na BlogIndana ịnụ isi okwu ya - ọ dịkwa mma njem ahụ. Enwere ọtụtụ ihe kpatara ya. Jay nwere ahụmahụ 20 afọ dị ka onye na-ere ahịa ma ọ naghị ezere ikwu echiche ya. Jay bụkwa ezigbo mmadụ - enweghị ọdịiche dị n'etiti onye ị hụrụ n'elu ikpo okwu na onye ị ga-ahụ n'onwe gị. Ọzọkwa, mgbe m hụrụ Jay ka o kwuru ọkara ugboro iri na abụọ, ahụbeghị m otu ihe ngosi ahụ ugboro abụọ.
M nọ na-akwara Jay ákwá na m na-achọsi ike otú ụfọdụ blọọgụ ndị dị obere karịa nke m si anata retweets, mmasị na aha. Ọbụna echere m, ma eleghị anya, ọ bụrụ na ụfọdụ ndị na-egwu egwuregwu na-egwu egwuregwu. Jay echeghị na ha bụ - ọ na-enweta ọtụtụ retweets na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Kwenye ma gbanwee (a ga-agụ!).
Ekwetaghị m na ogo nke post a ga - abụ okwu - a na - akwanyere anyị ùgwù nke ọma na ụlọ ọrụ ịzụ ahịa. Mụ na Jay tụlere olu nke okporo ụzọ m na-enweta yana, n'iji ya tụnyere, blọọgụ ya na-enweta ụdị ọgụgụ ya. Agbanyeghị, ndị na - agụ ya bụ ndị na - eme ihe ike na -ekere òkè ozi Jay weputara. Ọ bụghị obere ego - nnukwu ego… na-ekwu 200 tweets a post!
Na nkuku Jay bu ihe omuma ya di egwu, omuma ya n'iso netwọkụ ya kwurita okwu, yana nkwuwa okwu ya na-aga n’ihu. Ọ nwekwara ọtụtụ ndị na-eso ya na Twitter na Facebook karịa ka anyị na-eme. Na gburugburu, Jay bụ ọnya ole na ole karịa ọkwa m. Ọ bụrụ na m bụ onye isi, ọ bụ Admiral. Ana m asọpụrụ ya nke ukwuu.
N'ikwu okwu a, ọ bịara pụta ìhè na ndị na-eso Jay bụ ndị nwere nnukwu ikike. Ndị na-eso Jay nọ n'ọkwa kacha elu! Ọtụtụ n'ime ndị na - eso ụzọ Jay nwere nnukwu ihe na - esote ha - ọ na - amasị ha isoro netwọkụ ha kerịta. Nke a bụ ihe dị iche n’etiti ndị na-ege m ntị na nke Jay. Abụ m ụdị mkpụrụ na onye na-agba ya mgba na ndị na-ere ahịa na ọgba. Ọ bụ ezie na anyị na-adọta folks niile etoju nke agụmakwụkwọ na ụlọ ọrụ agadi… ọ bụ a blog banyere ahịa.
Jay nwekwara blog banyere ahia, mana ọ na-elekwasị anya ma nụchaa na mpaghara nke mgbasa ozi karịa m. Anyị bee a dum swath sw na ihe niile si nchịkọta email ahịa. Ndị na-ege m ntị rutere na-arụ ọrụ, mana enweghị ikike ịkekọrịta ma ọ bụ ịkwalite ọdịnaya m dere. Ọtụtụ n'ime ndị na-agụ akwụkwọ m anaghị arụ ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta, na-elekwasị anya na ahịa na mgbasa ozi.
Nke a bụ isi okwu m. Adịghị m ahụ ụzọ ka m na-ebe ákwá maka arụmọrụ nke ọdịnaya m. Ekwesighi m ịda mba ma ọlị - ekwesịrị m ịgba m ume na m na-agwa otu ndị na-agụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ na-abanyeghị na mgbasa ozi mmekọrịta ka ọ dị ugbu a. Enwere m olileanya na m nwere ike inyere ha aka ịba ebe ahụ, mana ọ nwere ike ọ gaghị abụ taa ma ọ bụ echi, ọ nwere ike ịbụ ọtụtụ afọ. O nwere ike ịbụ na netwọk gị yiri nke a, karịchaa ma ọ bụrụ na ịnọghị na ntanetị. Enwela nkụda mmụọ ka ị na-ede ọtụtụ nnukwu ọdịnaya mana ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-ekerịta ya. Ọ bụghị onye ọ bụla nwere mmekọrịta dị ka anyị.
Atumatu Social Media na Ebe Ọrụ
Worklọ Ọrụ Ekwentị
Aug 12, 2011 na 5:30 PM
Daalụ. Ekwesighi m inweta nke ọ bụla, mana ekele.
Enwetụbeghị m ọnụ ọgụgụ na nke a n'ụzọ doro anya, echekwara m na enwere ndị na-apụ apụ, mana ekwenyere m na ọ bụ eziokwu na akụkọ. Ihe m na-agwa ndị ahịa m blọọgụ bụ na ọ ga - eme ka ọdịnaya gị belata, ọ ga - abụrịrị na ị ga - eme ka ịkekọrịta na ịdenye aha, n'ihi na o yikarịrị ka onye na - agụ ya ọ dị ka ị na - ekwu maka ọnọdụ ha. Tradezụ ahịa ahụ bụ okporo ụzọ.
Buru Ikwu = ọzọ ọbịa, na-erughị nkekọrịta + ndenye aha
Mkpokọta = ndị ọbịa pere mpe, ntinye aka + ntinye aha
Damn, ugbu a, m ga-ede blog banyere nke a kwa! Daalụ maka nudge DK. Ọ dị mma ịhụ gị mgbe niile!
Aug 12, 2011 na 5:55 PM
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, Jay! Na-atụ anya post. Ka anyi nweta Mezcal Blanco n'oge na adighi anya.
Aug 15, 2011 na 4:40 PM
Twitter ka bụ ebe egwuregwu nke “twitterati” nke ọgụgụ isi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. M na-agbaso ihe karịrị otu narị mmadụ na ahịa / mmekọrịta / teknụzụ naanị, ma ọ nwere ike ịbụ ntakịrị ụjọ iji hazie ozi niile. Otutu n'ime ọdịnaya a na-edegharịghachi na-esite na obere obere. Na-ekwu maka mkpokọta, olee otu anyị si wepụta ya aggravation. Otu ihe m ga-agwa Dick Costolo na Twitter bụ "Nweta Twitter si n'ebe ndị mmadụ nọ, ọtụtụ ndị ọrụ a na-asachaghị, nye m nde ndị ọrụ Twitter narị anọ, na-ekwu maka etu esi enweta ego bara uru." Mana abia n’ihe unu na-eme, isi okwu bu ikwesiri inye echiche bara uru, nke na-akpali iche echiche, kwa oge. Na (mpịakọta mpịakọta) ị ghaghị, naanị ị ga-eso ndị na-ege ntị na-emekọrịta ihe, site na nkọwa, na mmemme, ebe niile. N'ezie, n'ọtụtụ ọnọdụ, ihe m na-agụ na-abụkarị ihe dị mma na ha. Nke a bụ ọbụbụ ọnụ na ngọzi nke ofufe dị ka eziokwu nke oke anyị.